प्रकाशमान र विश्वप्रकाश शर्माको समर्थन देउवालाई दिने निर्णय ! - jagritikhabar.com
प्रकाशमान र विश्वप्रकाश शर्माको समर्थन देउवालाई दिने निर्णय !
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शेरबहादुर देउवालाई पार्टी सभापतिमा समर्थन गरेका छन्।आज आएको मतपरिणामअनुसार सभापति पदमा देउवाले धेरै मत ल्याएका थिए भने दोस्रो धेरै मत शेखर कोइरालाले ल्याएका थिए। पहिलो चरणको मतपरिणाम आएलगत्तै देउवानिकट बालकृष्ण खाँण र वीरबहादुर बलायर प्रकाशमानलाई मनाउन चाक्सीबारी पुगेका थिए।
उनीहरुलगत्तै शेखर कोइरालाले पनि प्रकाशमानलाई भेटेका थिए। विमलेन्द्र निधिले पनि सिंहसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए ।यी नेताहरुसँगको कुराकानीमा प्रकाशमानले साथीहरुसँग सल्लाह गरेर निर्णय दिने बताएका थिए ।
यसै क्रममा प्रकाशमान सिंहले शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्ने निर्णयप्रति विश्वप्रकाश शर्माले समर्थन जनाएका छन् । मंगलबार बिहान चाक्सीबारीमा भएको भेटवार्तामा सभापतिको निर्वाचनमा सिंहले देउवालाई समर्थन गर्ने सहमति भएको हो । शर्मा सिंहको प्यानलबाट महामन्त्रीका उम्मेदवार हुन् ।
‘सर्वसम्मति सर्वोत्तम ! दोस्रो चरणमा जानैपर्दा प्रस्ट्याउँदछु- नेता प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा महामन्त्रीको उम्मेदवार भएकाले उहाँ उभिनु भएको ठाउँमा म उभिनुपर्छ । पराजित भए पनि उहाँलाई साथ दिनु मेरो कर्तव्य हो । सही निर्णय गर्न सक्ने उहाँको क्षमताप्रति म विश्वस्त छु,’ शर्माले ट्विटमार्फत भनेका छन् ।